अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँग गर्भावस्थाबारे कुराकानी (भिडिओ) :: शोभा शर्मा :: Setopati
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँग गर्भावस्थाबारे कुराकानी (भिडिओ)
'सार्वजनिक रूपमा उत्सव मनाएर मैले गल्ती गरेँजस्तो लाग्दैन'
उनी आफूले गर्भावस्था 'सेलेब्रेट' गरिरहेको बताउँछिन्।
तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा राखेका फोटाकै कारण प्रियंका र उनका श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीले आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ। कतिपयले गर्भ रहेको पेट देखाएर 'अंग प्रदर्शन' गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। अरू धेरैले उनको समर्थन गर्दै शुभकामना दिएका छन्।
प्रियंका भने यी सबै कुराले आफूलाई प्रभाव नपार्ने बताउँछिन्।
भन्छिन्, 'आमा बन्नु एकदम खुसीको कुरा हो। म आफ्नो खुसी बाँड्न मन पराउँछु। म जस्तो छु, त्यस्तै देखाउन पनि चाहन्छु। मैले त्यही खुसी सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी हुँ। मलाई नराम्रो भन्नुमा मेरो केही दोष छैन। दोष देख्नेको मलाई वास्ता पनि छैन। राम्रो भन्नेहरू पनि धरै हुनु हुन्छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया देखेर मलाई अझ खुसी लाग्छ।'
प्रियंका भन्छिन्, 'कति धेरै दिदीबहिनीहरूले मलाई गर्भावस्थाबारे सोध्नुहुन्छ। यसबारे जानकारी होस्, अनुभवहरू बाँडियोस् भनेर पनि म कुरा गरिरहेकी हुन्छ। म गर्भवती हुनुअघि जसरी फोटा राख्थेँ, अहिले त्यसरी नै राखिरहेकी छु। पहिले तारिफ र प्रशंसा गर्नेहरूलाई अहिले किन आपत्ति? गर्भ रहेको पेट किन समस्या भएको हो?'
प्रियंकाको गर्भावस्था अनुभव र सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया वरपर रहेर हामीले उनीसँग कुराकानी गरेका छौं।
भिडिओः निशा भण्डारी
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८, ०२:२१:००